संरक्षणका लागि वहष
२०७४ माघ २९ सोमबार ०३:५८
पदम बडाल दार्चुला ,,
यो पटक वार्डेन सम्मेलन दार्चुलामा हुने भन्ने समाचारले सामान्यतः सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण भएको हुनु पर्दछ । वार्डेनहरुको सम्मेलन हुनुले देश कै ध्यान एक पटक पुनः दार्चुलातिर तानिने कुरामा दुई मत छैन । दार्चुला जिल्लामा पटक पटक देशको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने परिघटनाहरु दोहोरिरहन्छन् तर बिडम्बना हामी अझै पनि विकासको मूलधारमा आउन सकेका छैनौं । हाम्रा तयारी नपुगेका हुन् वा कार्यान्वयन पक्षमा हामीले ध्यान नदिएको स्वयम् वार्डेनहरुले हेर्ने संरक्षणले पनि मूर्तता लिन सकेको छैन । हुन त केही वर्ष मात्रै भएको छ, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र स्थापना भएको । यसको जिल्ला परिषद्ले एक कार्यकाल पनि पूरा गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संरक्षण क्षेत्रको सफलता र असफलताको आँकलन गर्नु त्रुटिपूर्ण नै हुनेछ तर प्रारम्भिक सङ्केतहरु जस्तो देखिएका छन् तिनीहरुले हामी सही दिशातिर जान सकेनौं कि ? भन्ने प्रश्नतिर घोत्लिनु पर्ने बेला आएको छ । संरक्षण क्षेत्रले प्रारम्भिक चरणमा जुन आलोचना खेपेको थियो त्यो आलोचनलाई गलत सावित गर्न अझै सकिएको छैन । राजनीतिक गन्ध लिएर जुन उपभोक्ता समितिहरु गठन गरियो तिनीहरुको प्रभावकारी परिचालन न गर्न सकिएको देखिन्छ न ती समितिहरु स्वयम् परिचालित नै भएका देखिन्छन् ।
यार्शा सङ्कलकहरुबाट उठाइएको पैसाको हरहिसाब सार्वजनिक गर्ने सवालमा हुन् वा स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा होस् संरक्षण क्षेत्रको परिषद्, उपभोक्ता समितिहरु र स्वयम् कार्यालय पनि आलोचित भएको छ । यसको प्रमाणका रुपमा परिषद्का अध्यक्ष र कार्यालयले खेपिरहेको अख्तियारको मुद्दा पनि हो । हो, आगामि दिनमा ती आरोपहरुबाट सम्बन्धित पक्षले उन्मुक्ति पाउलान् तर के अहिलेसम्म गरिएका कामहरु संरक्षण क्षेत्रभित्रका नागरिकहरुको जिविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याई संरक्षणतिर उन्मुख भएका छन् ? अझ दुखद पक्ष त के भन्दा स्वयम् संरक्षण क्षेत्रभित्रका दर्जनौं सामुदायिक वनहरु अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् तर काष्ठ र गैरकाष्ठ पैदावारको उपभोगमा कुनै कमि आएको छैन ।
प्राकृत स्रोतमा आश्रित नागरिकको जिविकोपार्जनमा परिवर्तन नल्याई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सोचे जस्तो हुनै सक्दैन । स्रोतमा निर्भर जनजीवन र अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै स्रोतको उच्च दोहन हुनबाट बचाउँछ । योतर्फ ध्यान जानै सकेको छैन । अरु निकायले पनि गर्दै आएका बाटो निर्माण, शौचालय निर्माण, मन्दिर निर्माण जस्ता योजनाहरुलाई नै प्राथमिकता दिइदाँ कसरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न सकिन्छ ? वार्डेन सम्मेलनमा बस्नु पूर्व सरोकारवालाहरुले यी कुराहरुलाई पनि मनन गर्नु पर्दछ ।
दार्चुला सन्देश दैनिककाे वर्ष ११ अङ्क १२९ काे सम्पादकीय ।